Sexiest organs and touch in women-महिलालाइ कहाँ छुदा झट्का लाग्छ ? ~ Khabardari.com
Sexiest organs and touch in women-महिलालाइ कहाँ छुदा झट्का लाग्छ ?
महिलाका कुन भाग बढी उत्तेजीत हन्छ भन्ने सन्दर्भ सबैको कौतुहल्ताको बिषय हुन सक्छ । महिलाको तिघ्राको भित्री भाग अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। उक्त भागको छाला धेरै पातलो हुन्छ र त्यहाँ कैयन् उत्तेजक तत्त्व हुन्छ। त्यसैले यो भागलाई कामोत्तेजक मानिन्छ। यो भागमा स्नेहपूर्व भए, सुमसुम्याए वा चुम्बन गरे महिलाहरूमा कामोत्तेजना वृद्धि हुन्छ र उनीहरू यौनसम्पर्कका लागि बढी उत्प्रेरित हुन्छन् र त्यसबाट आनन्द पनि प्राप्त गर्छन्। अधिकांश पुरुष यौन सक्रियताका बेला माहिलाहरूलाई उत्तेजित गर्न तिनका एक वा दुई शारीरिक अंगमै बढी केन्द्रित हुन्छन् तर महिलाका शरीरमा कैयन् त्यस्ता अंग छन् जहाँ स्पर्श मात्र गर्दा पनि उनीहरूमा कामेच्छा जागृत हुन्छ ।
१. तिघ्राको भित्री भागः तिघ्राको भित्री भाग अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । उक्त भागको छाला धेरै पातलो हुन्छ र त्यहाँ कैयन् उत्तेजक तत्त्व हुन्छ । त्यसैले यो भागलाई कामोत्तेजक मानिन्छ । यो भागमा स्नेहपूर्व भए, सुमसुम्याए वा चुम्बन गरे महिलाहरूमा कामोत्तेजना वृद्धि हुन्छ र उनीहरू यौनसम्पर्कका लागि बढी उत्प्रेरित हुन्छन् र त्यसबाट आनन्द पनि प्राप्त गर्छन् ।
२. हातका भित्री भागः हातको भित्री भागको छ पातलो हुन्छ र त्यहाँ कैयन् उत्तेजक तत्त्व हुन्छन् । यो भागमा प्रेमपूर्ण क्रियाकलाप गर्नाले तुरु न्तै मस्तिष्कसम्म संकेत पुग्छ । यो भागमा यौनसाथीको स्पर्श मात्र पनि महिलाहरूलाई कामोत्तेजित गर्न पर्याप्त छ ।
३. कानः कान पनि महिलाहरूको प्रमुख कामोत्तेजक अंगमध्ये एक हो । यो शारीरिक एवं मानसिक दुवै रूपमा कामोत्तेजित गर्न सहायक हुन्छ । महिलाहरू को कानमा प्रेमपूर्वक फुसफुसाए, चुम्बन गरे वा जिस्किए उनीहरूको कामोत्तेजना बढ्छ । यसबाहेक यौन सम्र्पकका बेला कामुक कुराकानी गर्दा पनि उनीहरू कामोत्तेजित हुन्छन् ।
६. पाइतालाः प्रायः गरी मानिसहरू यो भागलाई बेवास्ता गर्छन्, तर आश्चर्यजनक रूपले यो कामोत्तेजक अंगमध्येको एक हो । यो स्थान नर्व एन्डिङबाट भरिपूर्ण हुन्छ । फलस्वरूप यो भाग अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छ ।
पाइतालाको स्पर्श मात्रले पनि महिलाहरूमा कामोत्तेजना जागृत गर्छ ।